မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အောက်တန်းကျလှတဲ့ အစ္စလာမ် ကုရ်အာန် အယူဝါဒထဲ က - ဟလာလာ ( halala ) အကြောင်း ~ Myanmar Forward
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ - မူဆလင်မိန်းမတစ်ယောက်ကို - ဘုံလင်ကြီး က ပါးစပ်ကနေ " တဲလက်ခ် " ( Talaq ) လို့ ၃ကြိမ်အော်လိုက်တာနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
အဲဒီ ကွာရှင်းပြီးသား မူဆလင် မိန်းမကို - မူဆလင် ကောင်က ပြန်လည် ပေါင်းချင်တဲ့ အခါမှာတော့ - အင်မတန် ယုတ်ညံ့အောက် တန်းကျ လှတဲ့ - အစ္စလာမ်ကုရ်အာန် အယူဝါ ဒအရ -ပြဿ နာက စတင်ပါပြီ။
လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စိတ္တဇဝေဒ နာရှင်- မုဒိမ်းကောင် မုဟမ္မဒ်ထွင် ထားတဲ့ - အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ - ကွာရှင်းပြီးသား မယားကို ပြန်ပေါင်းချင်ရင် - ဒီအတိုင်းပေါင်းလို့မရပါဘူး ။
အစ္စလာမ် ကုရ်အာန် အယူဝါဒအရ - ကွာရှင်းပြီးသား မယားကို ပြန်ပေါင်းချင်ရင် - အဲဒီမယားကို လူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခိုင်း - အဲဒီလူစိမ်းနဲ့ ညားပြီး ( လိင်ဆက် ဆံပြီး ) တော့မှ - အဲဒီလူ က ပြန်လည်စွန့် ပစ်တော့မှ အဲဒီ မယားကို ပြန်ပေါင်းခွင့် ရှိပါတယ်။
The Qur'an expounds: “So ifahusband divorces his wife (forathird time), he cannot, after that remarry her until after she has married another husband and he has divorced her. In that case, there is no blame on either of them if they re-unite, provided they can keep the limits ordained by Allah. Such are the limits ordained by Allah which He makes plain to those who know”. (2:230).
ကုရ်အာန်ကျမ်းချက် - Surah ၂း၂၃၀ ဖြစ်ပါတယ်
အစ္စလာမ် ကုရ်အာန် အယူဝါဒရှင် သန်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး - ကမ္ဘာဆုံးသည့်တိုင်အောင် အောက်တန်းကျ လှတဲ့ ဒီအစ္စလာမ်ဥပဒေကြီးဟာရှိနေအုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ္တဇဝေဒနာရှင် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ - ကျေးကျွန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ ခမြာတော့ အင်မတန်ကျဉ်း တည်း ကျပ်တည်းဖြစ်ကြရပါတယ်။
ကိုယ့်မယားကို လူစိမ်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့ ။ အဲဒီလူ က စိတ်ချ ရအုန်းမှလေ။
ဒီတော့ မဖြစ်မနေတော့ - မူဆလင်တွေ ကိုယ့်မယားကို တခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ခိုင်းရတော့ မယ်။
အဲဒီလူက စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကူညီပေးမဲ့ သူဖြစ်ဖို့ က အရမ်း အရေးကြီးတယ်။
ဒီတော့ -အစ္စလာမ် ကုရ်အာန် အယူဝါဒအရ - အကျင့်သီလ၊ သမာဓိပြည့်စုံတဲ့ သူတွေဆိုတာ - ဗလီဆရာတွေ ပဲပေါ့ ( လာပြီ၊ လာပြီ၊ ကူညီပါရစေ )
အဲဒီမှာ မူဆလင်တွေ ဟာ - ကိုယ့်မယားကို- ဗလီဆရာဆီမှာ ဆက်သနေရတဲ့ ဘ၀ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ကွာရှင်းပြီး သားမိန်းမကို ဗလီ ဆရာနဲ့ လိင်ဆက် ဆံခိုင်း ရပါတယ်။
ကွာရှင်းပြီးသား မိန်းမကို ဗလီဆရာနဲ့ လက်ထပ်ပေးပြီး ( လက်ထပ် စရိတ် ကိုလည်း ပြန်ပေါင်း ချင်တဲ့ မူဆလင် လင်ဟောင်းက ပေးရ ပါတယ် )
ဗလီ ဆရာနဲ့ လက်ထပ်တာ အထမြောက်ကြောင်း - ဗလီဆရာ က ကွာရှင်းပြီး သားမိန်းမ ကို အသားလွတ် လိင်ဆက်ဆံပေး ရပါတယ်
( အဲဒီလို လိင်ဆက် ဆံပေးရတဲ့ အတွက် - လိင်ဆက်ဆံပေးခကို လည်း ဗလီဆရာကို ပေးရပါတယ် = ယောကျာ်းကြေး စားပေါ့ဗျာ )
ဗလီဆရာတွေ က တော့ ၊ ပိုက်ဆံလည်းရတယ်။ သူများမယားကို လည်း အညွှန့်ခူးပြီး လိင်ဆက်ဆံ ခွင့်ရတယ်။
ကာလတစ်ခု အထိ - ဗလီဆရာအိမ်မှာ မွတ်ဆလင်မယားကို ထားပြီး ဗလီဆရာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ခိုင်းရပါတယ်။
ဗလီဆရာ ကလည်း - သူများမယားကို တန်အောင်လို့ လုပ်မှာပေါ့ဗျာ။ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့၊ ဖွတ်ဖွတ် ညက်ညက်ကြေအောင်။
အဲဒီလို - ဗလီဆရာက ကာလတစ်ခု အထိ - မွတ်ဆလင်မယား ကို ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေအောင် လိင်ဆက် ဆံပြီး ကာမှ - ပြန်လည်ပြီး စွန့်ပစ်ရပါတယ်။
အဲဒီလို - ဗလီဆရာက ဖွတ်ဖွတ် ညက်ညက် ကြေအောင် လိင်ဆက်ဆံပြီး စွန့်ပစ် လိုက်တဲ့ မူဆလင်မယား ကို မှ - မူဆလင် လင်ဟောင်းက - အစ္စလာမ်ကုရ် အာန်အယူ ၀ါဒနဲ့ အညီ တရားဝင် ပြန်လည်-ပေါင်းထုပ်ခွင့်ရှိ ပါသတဲ့။
မူဆလင်တွေ က - မြန်မာတွေကို နှိမ်ပြီးပြောပြောနေတဲ့ ပုဂံခေတ်ဦး ကာလက ပန်းဦး ဆက်သရတဲ့ အရည်းကြီး ၀ါဒဆိုတာ.. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်ထောင်လောက်ကတည်းက ကွယ်ပျောက်သွားခဲ့ပေမယ့်
မူဆလင်တွေရဲ့ ကိုယ့်မယားကို- ဗလီဆရာဆီမှာ ဆက်သပြီး - ကိုယ့်မယားကို ဗလီဆရာနဲ့ လိင်ဆက် ဆံခိုင်းရတဲ့ ဘ၀ က တော့ - လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကနေ
ယနေ့ခေတ်အထိကို....အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ- မူဆလင်တွေ - ကိုယ့်မယားကို ပြန်ပြီး - ဗလီဆရာ နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခိုင်းရဆဲပါပဲ
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန် အယူဝါဒ ရှင်သန်နေသမျှကာလပတ်လုံးလဲ- မူဆလင်တွေ ကိုယ့်မယားကို- ဗလီဆရာဆီမှာ ဆက်သနေရတဲ့ အဖြစ် ဟာလက် ဆက်လက်ရှိနေအုန်းမှာပါပဲ။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒဟာ - အင်မတန်အောက်တန်းကျလှတယ်ဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေပါပြီ။
ဒီလို - လူသိမခံနိုင်တဲ့ - အောက်တန်းကျလှတဲ့ အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအကြောင်းကို - တစ်သက်လုံး သူများတွေ မသိအောင်ဖုံးဖိထားပြီး - ဖင်ပိတ်ငြင်းနေရတဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ ရဲ့ အဖြစ်ဟာ
ရှေ့ က ဗြောင်လိမ်ပြီး နောက်မှာဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ မူဆလင်တွေ ပါပဲ။
အစ္စလာမ်ဟာ Psychopath မုဒိမ်းကောင်မုဟမ္မဒ် ထွင်ထားတဲ့ အယူဝါဒလို့ မပြောရဘူး။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒမှာ လိင်နဲ့ပက်သက်လာရင် အင်မတန်အောက်တန်းကျလွန်းလှပါတယ်။
မွတ်စလင်မ်မိန်းမတွေရဲ့ အစိကို ဖြတ်ခိုင်းတယ်။
မွတ်စလင်မ်မိန်းမ၄ယောက် ကို မွတ်စလင်မ်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်တည်းရဲ့ - တုတ်ကို အောက်တန်းကျကျ Share ပြီးမျှဝေသုံးခိုင်းတယ်
မူဆလင်ကောင်ကြီး တစ်ကောင် က အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ- တရားဝင်မယားအများအပြား ( အများဆုံး အရေ အတွက် အကန့် အသတ် မရှိ) ယူလို့ ရတာ အားလုံး လည်းသိပါတယ်။
မူဆလင်မတွေ အားလုံးဟာ ဘုံလင်ကြီး အချိန်မရွေးလိင်ဆက်ဆံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေအောင် မူဆလင်မတွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေ ကို အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်ထားရမယ်။
လိင်မဆက်ဆံချင်ဘူး။ မခံချင်ဘူးငြင်းမိရင် နေရင်းထိုင်ရင်း ငရဲကျရအုန်းမယ်။
အဲဒီ မယားတွေရဲ့ - ဘုံလင်ကြီးဖြစ်တဲ့ မူဆလင်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်က- စိတ်ကုန်ရိုးအီလာတဲ့ မူဆလင် မိန်းမတစ်ယောက် ကို အချိန်မရွေး ကွာလို့ ရပါတယ်
လူ့အခွင့် အရေး၊ အမျိုး သမီး အခွင့် အရေး အရ နှစ်ဦး သဘော တူမှာ ကွာလို့ ရပေမယ့်
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန် အယူဝါဒမှာတော့ - ဘာလူ့ အခွင့် အရေး၊ ဘာအမျိုး သမီး အခွင့် အရေး၊ ဘာကလေး သူငယ် အခွင့် အရေးမှ မရှိပါဘူး။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ- ဘုံလင်ကြီးဖြစ်တဲ့ မူဆလင်ကောင်ကြီးတစ်ကောင်က- စိတ်ကုန်ရိုး အီလာတဲ့ မူဆလင် မိန်းမတစ်ယောက် ကို အချိန်မရွေး ကွာချင်ရင် -ပါးစပ်ကနေ " တဲလက်ခ် " ( Talaq ) လို့ ၃ကြိမ်အော် လိုက်တာ နဲ့ပြီးပါပြီ။
အစ္စလာမ် ကုရ်အာန် အယူ ၀ါဒ အရ - မူဆလင် မိန်းမ တစ်ယောက်ကို - ဘုံလင်ကြီး က ပါးစပ်ကနေ " တဲလက်ခ် " ( Talaq ) လို့ ၃ကြိမ်အော်လိုက်တာနဲ့ ကွာရှင်းပြတ် ဆဲပြီး သားဖြစ်သွားပါပြီ။
မွတ်စလင်မ်မိန်းကလေးတွေဟာ ငယ်လွန်းတဲ့အချိန်ကတည်းက အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင် - မူဆလင်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မယားများစွာထဲက တစ်ယောက် အဖြစ် သိမ်ပိုက်ခံ၊
ငယ်လွန်းသေးတဲ့ အချိန်ကတည်းက မတရား လိင်ဆက်ဆံခြင်းခံရ၊
အချိန်မရွေး - ပါးစပ်ကနေ " တဲလက်ခ် " ( Talaq ) လို့ ၃ကြိမ်အော်လိုက်တာနဲ့ - ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးသား မိန်းမဘ၀အဖြစ်ကို ကျရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်- မူဆလင်ကောင်ကြီးတွေရဲ့ ရက်စက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေ ကြားထဲမှာ ကို ပဲ အသက်ကုန်ဆုံးသည်တိုင်အောင်နေကြရပါတယ်။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ - မွတ်စလင်မ်မိန်းကလေးတွေ က လူညွှန့်တုံး ၊ အိမ်တွင်းပုန်းဘ၀နဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူ့ဘ၀တွေကို ကုန်ဆုံးနေကြရပါတယ်။
အမျိုးသမီးများအတွက် ဘာမှ အကာအကွယ်မရှိ၊ မူဆလင်ကောင်တွေ က မူဆလင်မတွေ ကို အသေရိုက်နှက်၊ အသေနိုင်ကာ၊ မူဆလင်မတွေ ကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ထားတာဟာ - " မုဒိမ်းကောင်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ္တဇ " ကို အခြေခံပြီး စလိုက်တဲ့ အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒ ရှရီးယားဥပဒေပါပဲ။
ကိုယ့်မယားကို- ဗလီဆရာဆီမှာ ဆက်သပြီး - ကိုယ့်မယားကို ဗလီဆရာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခိုင်းတဲ့ - အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုပါကအောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.
" ဂုဏ်သရေရှိ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း " ဆိုသည်မှာ...
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အစိ ကို ဓားနဲ့ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ အစိဖြတ်တမန်တော် မုဟမ္မဒ်
သူနဲ့လိင်မဆက်ဆံခြင်းဘူးငြင်းတဲ့ မိန်းမဟာ ငရဲကျမယ်လို့ မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မုဟမ္မဒ်
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါး အလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည် ။
28 July 2013 at 02:37:00 GMT+6:30
ငါလိုးမ စောက်ကုလားကောင်တွေ လူမဟုတ်တဲ့ ခွေးဝဲစားတွေ ငါတိူ့မြေက အခုထွက်သွား..